China Paddy Seed Processing Mashiinnada nadiifinta abuurka warshadaynta soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | SYNMEC
Paddy Seed Processing Mashiinada nadiifinta hadhuudhka iniinta line nadiifinta
SYNMEC waxay bixisaa warshada warshadaynta abuur qaabaysan oo loogu talagalay codsiyada wax soo saarka sare ee habaynta badarka kala duwan. Ku rakibida goobta iyo adeega tababarka safka hore ayaa diyaar u ah macaamiisha. Erayga injineernimadayadu waxay leeyihiin khibrad badan oo ku saabsan rakibidda iyo hagaajinta. Warshada warshadaynta abuur ee SYNMEC ayaa hadda ka shaqaynaysa shanta qaaradood.
10T/H Warshada Ka-hortagga Abuurka Barley ee Australia
Sannadkii 2012, hal macmiil oo Australian ah ayaa ka dalbanaya warshadeena. Wuxuu rabaa inuu nadiifiyo shaciirka, sarreenka, miraha oatka oo uu u iibiyo calaamade ugu dambeyntii. Waxa uu lahaa mishiin u gaar ah oo dahaadhida abuur si aanu u siino mishiino kale.
Khadkaan nadiifinta waxaa ka mid ah:
1.5X-12 Nadiifiye abuur wanaagsan: Nadiifiyaha abuur nooca Cimbria kaas oo ka saari kara boodhka, wasakhda khafiifka ah, ka weyn oo ka yaraynaysa wasakhda.
2.5XZ-10 kala soocida cuf-jiidadka: Nooca Oliver American kaas oo ka saari kara qayb la cunay, aan qaan-gaarin, cayayaanka dhaawacmay iyo abuur buka
3. Mashiinka bacaha ee DCS-50B: Ku xidh hadhuudh bacda (10-50 kg kiishadiba)
Qaybaha kale: nadiifinta hawada iyo nidaamka ka saarista boodhka ee dibadda
Sawir Naqshadeynta Dhirta
Sanduuqa xakamaynta tamarta tayada sare leh oo leh halbeeg caalami ah.
1. 5XZP Drum nooca hore ee nadiifiyaha
2. 5XTB-5 Debearder hadhuudh
3. 5X-5 nadiifiye abuur wanaagsan
4. 5XWT-6 kala soocida dhumucda
5. 5XZ-6 kala soocida cuf-jiidadka
6. 5BY-5B Mashiinka dahaarka abuur
7. DCS-50B machi
5X-12 Nadiifiyaha Abuurka Fiican:
Taxanaha 5X Nadiifiyaha Abuurka Fiican waa mishiin caalami ah oo si fiican ugu habboon nadiifinta ka hor iyo nadiifinta noocyo badan oo kala duwan oo hadhuudh iyo miro ah.
Naqshadaynta caadiga ah ee mashiinka waxaa lagu bixiyaa labadaba ka hor iyo ka dib unugyada nuugista. Shaashadda degdega ah oo ka beddelaysa nadiifinta hore una beddelaysa nadiifinta wanaagsan ee hawlwadeenku wuxuu u adeegaa si uu u wanaajiyo hawlaha nadiifinta. Nadiifiyaha abuurka taxanaha 5X waa mashiin aad u tartan badan, labadaba xagga qiimaha iyo awoodda iyo sidoo kale shaqada iyo hawlgalka.
Tignoolajiyada mashiinka si fiican ayaa loo tijaabiyay, taas oo lagu diiwaangelin karo tixraacyo badan oo adduunka oo dhan ah.
Waxay leedahay nadiifinta heer sare ah waxaana si ballaaran loogu isticmaali karaa ka baaraandegidda sarreenka, bariiska, galleyda, shaciir, digir iyo iniin kale oo badan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dhammaan noocyada kala duwan ee nadiifinta hadhuudhka.
Awood la qiimeeyay 10 t/saacaddii
Guud ahaan mugga hawada 8200 m3
Afuufiyaha hawada dibadda 4-72N0-6A, 7.5 kW
Cabbirka Shaashada (L×W) 800×1250 mm
5XZ-10 Kala soocida Cuf-jiidadka
5XZ-10 kala-soocidda cuf-jiidad waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro alaabooyinka leh kala duwanaansho miisaan gaar ah.
Kala-soocidda Cufis-jiidadu waa nakhshad heersare ah oo Maraykan ah, oo waxay leedahay 6 afuufiyaha hawada carrab la'aanta ah (oo inta badan lagu isticmaalo qaboojiyaha), iniinaha badarka ayaa sidoo kale ka soo bixi kara meesha ugu dambaysa sidoo kale dhinaceeda.
Hore: Alaabta Shiinaha ee Khadka Nadiifinta Hadhuudhka - 5M-2 Warshada Samaynta Shinnida Wareegta - SYNMEC
Xiga: Warshada nadiifinta badarka iyo digirta
Khadka Nadiifinta Abuurka
Baakadaha DCS-S nidaamka cabirka miraha abuurka badar b...
5XQS-10 Dhagax-dhige sisinta bariiska soybean